क्षयरोगीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अत्याधुनिक मेशिन जडान « प्रशासन
क्षयरोगीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अत्याधुनिक मेशिन जडान
१८ चैत्र २०७४, आइतबार
तनहुँ । तनहुँ जिल्लामा क्षयरोगीको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दमौली अस्पतालमा अत्याधुनिक उपकरण जडान गरिएको छ । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र काठमाडौंबाट सो उपकरण उपलब्ध भएपछि क्षयरोगीका बिरामीले राहत पाउने भएका छन् ।
४० लाखको लागतमा क्षयरोग परीक्षण गर्ने जिनेक्सपाट मेशिन जडान गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । उक्त उपकरणले क्षयरोगका अति सूक्ष्म जीवाणु पनि परीक्षण गर्न सकिने जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा. पवनजंग रायमाझीले बताए । नेपाल सरकारबाट क्षयरोगको निःशुल्क उपचार गर्ने भनिए पनि दमौली अस्पातालमा परीक्षण गर्ने उपकरण नहुँदा बिरामीलाई पोखरा, चितवन, काठमाडौं लगायतका प्रमुख शहरमा पठाउनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको थियो ।
सो मेशिनबाट परीक्षण गर्दा एउटा बिरामी बराबर एक हजार ७०० लाग्दछ तर दमौली अस्पतालबाट यसको निःशुल्क रुपमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको डा. रायमाझीले बताए ।
क्षयरोगीको खकार परीक्षणमा उक्त उपकरणले ९९ प्रतिशत जीवाणु पत्ता लगाउने छ । हप्ताको सात दिन क्षयरोगका बिरामीले यसको सेवा लिन सक्नेछन् । उक्त अस्पताललाई ३५ शय्या थप गरी ५० शय्याको अस्पताल बनाउने तयारी भइरहेको सो अस्पतालका चिकित्सकहरुले बताए । रासस